४ बर्षदेखि एनसेलको लुट, जनता ठग्ने र नियम मिच्नेलाई कहिलेसम्म छुट ?
एनसेलको लुटधन्दा, विशेष » ४ बर्षदेखि एनसेलको लुट, जनता ठग्ने र नियम मिच्नेलाई कहिलेसम्म छुट ?
काठमाडौँ - एनसेलले जनता ठग्ने गरेको आरोप नौलो होइन । एनसेलले करछलीको लागि संसददेखि सडकसम्म गरेको 'लविङ' को समाचार पनि नौलो होइन । तर नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रको बादशाह संस्था भनेर चिनिएको एनसेलले नेपालको कानुन पनि मिचेर ठगी धन्दा चलाईरहेको खुलासा भएको छ । सन्दर्भ : एनसेलले गरिरहेको वित्तीय कारोबारको हो । एनसेलले 'एनसेल सापटी' का नामामा वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ जसलाई नेपालको कानुनले बर्जित गरेको छ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (फाफिया) २०६३ को दफा २८ अनुसार वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । वाफियामा स्पष्टसँग वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने नपाउने उल्लेख गरेको भएपनि एनसेलले भने उक्त नियमलाई मिच्दै वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ । एनसेलले 'एनसेल सापटी' का नाममा ऋण दिने र त्यसको चर्को ब्याज असुली गरी जनता ठग्ने गरेको छ ।
कम्पनी ऐन पनि मान्दैन एनसेल
एनसेलले गरिरहेछ कर्पोरेट अपराध !
एनसेल सापाटीका नाममा यसरी हुन्छ ठगी :
एनसेलले रु. दुई भन्दा कम भएमा रु. २० रुपैयाँ सापटी लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो । एनसेलकै भाषामा 'सापाटी' पछि रु. १०० रिचार्ज गरेको खंदामा एनसेलले रु. २० सहित २२ रुपैयाँ ४८ पैसा र रु. एक सय अन्तर्गतको कर एक रुपैयाँ ९६ पैसा सहित जम्मा चार रुपैयाँ चौवालीस पैसा काटिदिन्छ । यसरी सापटी रु. २० र रु. १०० अन्तर्गतको करबापत एक रुपैयाँ ९६ पैसा सहित २ रुपैयाँ ४८ पैसा पनि तपाईंको रिचार्जबाट कट्टा हुन्छ । यसरी सरासर हेर्दा पनि २ रुपैयाँ ४८ पैसा एनसेलले ठग्छ ।
‘ऋण वा सापटी ?’
३६५० % ब्याज !
एनसेलको सापटी स्किम अनुसार उसैकै भासामा रु २० सापटी लिएको खण्डमा ८ मिनेट २० सेकेन्डमै कर बाहेक २ रुपैयाँ ४८ पैसा हुन आउँछ । सरसर्ती हिसाव गर्ने हो भने एनसेलले ३६५० % ब्याज लिने गरेको छ । यो त ब्याज लिनेको पनि हद भएन र ?
कति ठग्यो होला त एनसेलले ?
एनसेलले एउटा ग्राहकसँग ८ मिनेट भित्रै २ रुपैयाँ ४८ पैसा ठगी गरिरहेको छ । एनसेलकै पटक पटक प्रकाशित हुने बिज्ञप्तिमा उसले आफ्ना प्रयोगकर्ता करिव एक करोड चालिस लाख रहेको दावी गर्दै आएको छ । यसरी जनताबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेपनि एनसेललाइ अझैसम्म कसैले छुन सकेको छैन ।
बोल्न चाहेन एनसेल :
यस बिषयमा बुझ्न अर्थ सरोकार डटकमले एनसेलमा सम्पर्क गरेको थियो । तर यस बिषयमा सोद्धा त्यहाँका कर्मचारीले आफुले यस बिषयमा बोल्न नहुने बताए । सुचना अधिकारीको नम्बर माग्दा उनले भने, 'नम्बर दिन मिल्दैन ।'
प्रकाशित : Friday, August 12, 2016
Tags : एनसेलको लुटधन्दा, विशेष